यदि तपाईँ नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ भने यी मूख्य ५ चीजहरूको ख्याल राख्नुहोस् - Technology Khabar
» यदि तपाईँ नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ भने यी मूख्य ५ चीजहरूको ख्याल राख्नुहोस्
मानिसहरु कोरोनाभाइरसको महामारीपछि घरबाटै कक्षा लिने र घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका छन् । यसको लागि तपाईँले पक्कैपनि ल्यापटप प्रयोग गरिरहनुभएको होला । यदि तपाईं यसको लागि नयाँ ल्यापटप किन्नको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, आज हामी तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिनेछौं, ल्यापटप खरीद गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्ने चीजहरू के के हुन् भनेर ।
कुन ल्यापटप उत्तम हो ? यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन किनकि प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकता फरक हुन्छ। यही कारणले गर्दा बजारमा विभिन्न मूल्य दायराका धेरै ल्यापटपहरू उपलब्ध छन्, जसले गर्दा नयाँ ल्यापटप खरीद गर्दा ग्राहकहरू अलमल्लमा हुन्छन्।
ल्यापटपहरू बिभिन्न सुविधाहरू, आकार, डिजाइन र मूल्यका साथ आउँदछन्, तर कुन ल्यापटप किन्ने हो त्यो तपाईको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। हामी तपाईंलाई आज त्यस्ता महत्वपूर्ण ५ चीजहरूको बारेमा बताउँदछौं जुन तपाईंले ल्यापटप खरीद गर्नु अघि सम्झना राख्नुपर्छ ताकि तपाई ल्यापटप खरीद गर्दा सहज हुन सक्नुहुनेछ।
आफैलाई सोध्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको तपाईंको बजेट के हो ? तपाईंको आवश्यकताअनुसार आफ्नो बजेट निर्णय गर्नुहोस्, किनकि यदि आवश्यकता कम छ भने यसको मतलब अधिक पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। विभिन्न ब्राण्डका धेरै ल्यापटप मोडेलहरू प्रत्येक मूल्य दायरामा बजारमा उपलब्ध छन्।
र्याम र प्रोसेसरः
ल्यापटपमा प्रोसेसरले यसको क्षमता र र्याम स्मूथ मल्टी-टास्किंग सुनिश्चित गर्दछ। बजारको प्रायः ल्यापटपहरूमा तपाईले इन्टेल वा एएमडी सीपीयू पाउनुहुनेछ, तपाईको आवश्यकता अनुसार एएमडी चिप र इन्टेल प्रोसेसरहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरूले प्रायः इन्ट्रि स्तरका ल्यापटपहरूमा इन्टेल कोर आई३ चिपसेटहरू फेला पार्दछन्। तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाई कोर आई३, आई५, आई७ आदि प्रोसेसर मध्येबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
बजारमा तपाईले धेरै ल्यापटप मोडेलहरू १४ इन्चदेखि र १५.६ इन्च स्क्रीन आकारमा फेला पार्नुहुनेछ। यदि तपाईं धेरैजसो कामको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सानो स्क्रिन आकारको साथ ल्यापटप मोडेल खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामान्यतया तौलमा हलुका हुन्छ र सजिलै झोलामा फिट हुन सक्छ।
मनोरन्जन वा ती व्यक्तिहरू जसले दैनिक ल्यापटप लिएर यात्रा गर्दैनन्, तिनीहरूले भने ठूलो स्क्रिनको साथ ल्यापटप मोडेल खरीद गर्न सक्दछन्। तपाईंको ल्यापटप मोडेलको स्क्रिन आकार के हुनेछ तपाईंको आवश्यकता र बजेटमा निर्भर गर्दछ।
तपाईं बजारमा ५०० जीबी र १ टीबी हार्ड डिस्क ड्राइभ भएका धेरै ल्यापटप मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ। यद्यपि साना र हल्का तौलका ल्यापटपहरूको उपलब्धतासँगै, हाल सोलिड-स्टेट ड्राइभ (एसडीडी) पनि ग्राहकहरू माझ लोकप्रिय छन्। एसडीडी तिब्र छ तर अक्सर कम स्टोरेजको साथ आउँदछ। यस्तो अवस्थामा, जब तपाईं ल्यापटप खरीद गर्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईंको आवश्यकता अनुसार स्टोरेजमा नजर राख्नुहोस्।
ल्यापटपमा राम्रो ब्याट्री हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यदि ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा, तपाईंलाई पटक पटक चार्जिंगको लागि सकेट खोज्नु पर्छ। यदि कम्तिमा ल्यापटपले ४ देखि ६ घण्टाको ब्याट्री लाइफ प्रदान गर्दछ भने यो ठीक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ ल्यापटप खरीद गर्दा ब्याट्री ब्याकअपमा समेत ध्यान दिनुहोस्।
सञ्चारमन्त्री गुरुङको गंभिर आरोप- दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुगमनको कामै गर्न सकेन्
दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर सेक्युरिटी ल्याब स्थापना गर्ने, आशयपत्र आह्वान
एप्पलले आइफोनको तीनवटा नयाँ मोडल ल्याउने, यस्तो छ नयाँ आइफोनको नाम र फीचरहरु